WARKII U DAMBEEYEY: Maxaa ka socda Jiidaha dagaalka ee ay isku horfadhiyaan ciidamada PL & S/LAND, Kulamo xasaasi iska soo horjeeda oo ka dhacay Garoowe iyo Laascaanood? – Puntlandtimes
WARKII U DAMBEEYEY: Maxaa ka socda Jiidaha dagaalka ee ay isku horfadhiyaan ciidamada PL & S/LAND, Kulamo xasaasi iska soo horjeeda oo ka dhacay Garoowe iyo Laascaanood?
GAROOWE(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey oo Puntlandtimes.com ay ka helayso xiisadaha u dhaxeeya maamulada Puntland & Somaliland, ayaa sheegaya in ay sii korortay xiisaddan todobaadkii ugu dambeeyey, waxaana meelaha qaarkood la arkaya dhiilooyinka colaadeed oo gaaray heerkii ugu sareeyey, gaar ahaana dhinaca ciidamada.
Puntland ayaa doonaysa in ay dib u qabsato gobalka Sool oo kamid ah gobaladii ku bahoobay dhismaha maamulkaas sannadkii 1998-dii, waxaana xiisadda iyo arrimaha ku xeeranba ay ahaayeen kuwa soo taagan 10-kii sanno ee lasoo dhaafay.
Ka sokow xiisadda taariikh dhulka ay ku muransan yihiin labada maamul, haddana Somaliland ayaa qabsatay deegaanka Tukaraq oo masaafo dhan 60KM Waqooyi uga beegan caasumada Puntland ee Garoowe, waxaana qabsashadaas ay kaliftay xiisadda oo kororta.
Diyaar garoow dagaal oo socday todobaadkii ugu dambeeyey ayaa xaaladda ka dhigay in la dhameystiray dagaal buuxa oo dhinacyadan dhexmara, waxaana cabsida ugu badan laga qabaa in uu dagaalkas noqdo kii ugu weynaa ee abid dhexmara labada dhinac ee Puntland & Somaliland.
Warar xagga diblumaasiyadda ah ayaa sheegaya in ay jireen bilowgii xiisadan dadaal caalami ah iyo wadamada gobalku ay wadeen, laakiin uu soo afjarmay markii ay Somaliland diiday in ay ciidamadeeda kala baxdo deegaanada cusub ee ay galeen horaantii sannadkan, taasna waxay qasab ku noqotay Puntland in ay garowsato in ay gaarto magaalada Laascaanood.
Kulamo aan caadi aheyn ayaa saacadihii ugu dambeeyey ka kala socday Garoowe & Laascaanood, waxaana kulamada Garoowe ay ahaayeen kuwa ugu badan ee lagu falanqeynayay xaaladdaha Dagaalkan, waxaana sidaas oo kale Laascaanood ka dhacay kulan ay goobjoog ka ahaayeen xubno katirsan taliyaasha ciidamada maamulkaas.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa habeenimadii Jimcaha kulan deg deg ah iskugu yeeray xubnaha labada golle, Xisbiyada Mucaaradka oo ay ka wada hadleen dagaalada barriga uga furan iyo talaabooyinka ku aadan cabsida ay ka qabaan arrimaha hadda ka socda deegaanadaas, taas oo ay guddi gaar ah ku magacaabeen.
Horaan u sheegnay in wep kan naago qotaan oo ragu Ku yar yahay ana qaar sifaha dumrka leg baa qora faryii LA qaadaba ma tukaraq baa looga hadlaa
Barigii dagaalkii snm ta iyo faqshta warka kasoobaxa dagaalka warka kutiri kuteenka waxaa lo odhanjiray waa ganbadii dumarka putland times warkoodu waa ganbadii dumerka